မန်းချောင်းရေ မြင့်တက်လာပြီး တံတား ကမ်းကပ်ခုံ ရေတိုက်စားခံရမှုကြောင့် မန်းချောင်းကူးတံတား - Yangon Media Group
မန်းချောင်းရေ မြင့်တက်လာပြီး တံတား ကမ်းကပ်ခုံ ရေတိုက်စားခံရမှုကြောင့် မန်းချောင်းကူးတံတား
မင်းဘူး၊ ဇွန် ၁၇
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ် မန်းရေ နံမြေအတွင်းရှိ မန်းချောင်းကူးတံ တား(ချင်ထောင်/ဂွ)တံတားသည် မန်းချောင်းရေမြင့်တက်လာပြီး တံတားကမ်းကပ်ခုံ ရေတိုက်စားမှု ကြောင့် ပြိုကျနိုင်သဖြင့် အများ ပြည်သူများ အန္တရာယ်မဖြစ်ပေါ် စေရန် ယာယီပိတ်လိုက်ရကြောင်း မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဇွန် ၉ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် မန်းချောင်းကူးတံတား(ချင်ထောင်/ ဂွ)တံတားသည် တံတားကမ်းကပ် ခုံ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပြိုကျနိုင်သဖြင့် ဇွန် ၁၅ ရက်မှစတင်ကာ ယာယီပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ”လောလောဆယ်တော့ ဆိုင်ကယ်တွေ ဖြတ်သန်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ယာဉ်တွေကတော့ အန္တရာယ် မဖြစ်စေဖို့ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ယာယီပိတ်ထားပါတယ်။ ဒီနေ့မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အတူ ကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးပြီး အမြန်ဆုံးသွား လာလို့ရအောင် ဆောင်ရွက်သွား မှာပါ”ဟု မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးစန်းဌေးက ပြောသည်။
မန်းချောင်းကူးတံတား(ချင် ထောင်/ဂွ)မှာ မင်းဘူး/စကုမြို့ နယ်ရှိ ချင်ထောင်၊ ကျွဲကျ၊ မန်းကျိုး၊ ကျောက်စံ၊ ကံသစ်၊ ကုလားပါး၊ ထုံးမကြီး၊ ထနောင်းကုန်း၊ ရွှေလှေ စသည့်ကျေးရွာများမှ မင်းဘူးမြို့ သို့သွားလာရာ အဓိကတံတားဖြစ် ပြီး အဆိုပါတံတားမှာ အကျယ် ၁၄ ပေ ခြောက်လက်မ၊ အလျား ပေ ၃၆ဝ၊ ခံနိုင်ဝန် ၁၃ တန်ရှိပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေဘိုမြို့တွင် ကြက်ဝိုင်း ရဲဝင်ဖမ်း၊ ဆိုင်ကယ် ၁၃ စီးနှင့် လူလေးဦး ဖမ်းမိ
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် လိုင်လင်းပီ - ရေဇွာသွား လမ်းပိုင်းများ ပျက်စီး၍ ဒေသခံပြည်သ?
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်မှု အများဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖြ?
ပြည်သူများ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဆေးကုသနိုင်မည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကန်သာယာ ဆေးရုံသစ်ဖွင